काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारको (पुस १) लागि एक अमेरीकी डलरको खरिद मूल्य ११४ रुपैयाँ ७४ पैसा तोकेको छ । यसैगरी बिक्रि मूल्य भने ११५ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ । एक युरोको खरिददर १२९ रुपैयाँ ६२ पैसा छ भने बिक्रिदर १३० रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ । यसैगरी एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १४४ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रिदर १४५ रुपैयाँ ०४ पैसा रहेको छ...
काठमाडौं । नेप्से परिसूचक लयमा फर्किने संकेत गरेको छ । सेयर बजार कारोबार सुरु भएको आधार घन्टामै नेप्सेमा करिब ५ करोडको कारोबार हुँदा केही दिन बिग्रिएको बजारमा सुरुवाति सुधारको संकेत देखिएको हो । कारोबार सुरु भएको ३५ मिनेट बित्दा बजारमा ५९ कम्पनीका १ लाख २९ हजार कित्ता सेयर ५ करोड १७ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएका छन् । यसबेलासम्मा बजार परिसूचक ४ दशमलव २९ अंकले बढ्दै...
धनगढी । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक समाजवादको गफ दिने गरेपनि व्यावहारिक अवस्था अर्कै देखिएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिमका गरीब सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । केही दिनयता उपभोग्य सामग्री दाल, चामल, खानेतेल, चिनी, तरकारी, फलफूल लगायतको मूल्य बढेको छ । सामानको मूल्य बढेसँगै भान्सा पनि महंगिएको धनगढीकी शारदा क्षेत्रीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिलेको तुलनामा भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने खाद्य...
-गंगामाया अधिकारीको खातामा एक करोड, सम्झौताअनुसार ०७१ मै दिनुपर्नेमा ढिलो भएकाले ब्याजबापत थप २० लाख -आर्थिक सहायता माग्दै गृहमा ५ हजार निवेदन आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दुई महिनामै नेपाल सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पार्टी कार्यालय तथा व्यक्तिका नाममा झन्डै ३ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को साउन र भदौमा आर्थिक सहायता बजेट शीर्षकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय,...
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सञ्चार माध्यमहरुको विरोध गरेका छन् । बिहीबार बोलाइएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै उनले सञ्चार माध्यमहरुले आफु विरुद्ध नियोजित समाचार लेखेको आरोप लगाए । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको महाप्रबन्धकमा दिगम्बर झालाई नियुक्ति गर्दा कतिपय सञ्चार माध्यमहरुले २० करोड रुपैयाँ घुस लिएको समाचार लेखेको भन्दै सञ्चार माध्यम विरुद्ध असन्तुष्टी प्रकट गरे । बिहीबार बोलाइएको समितिको बैठकमा दिगम्बर झालाई...
किष्ट बैंकका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली पक्राउ परेका छन् । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले उनलाई भारतबाट पक्रेको हो। प्रहरी स्रोतले उनी भारतबाट पक्राउ गरेको पुष्टि गरे पनि विस्तृत जानकारी भने दिएको छैन । ६ करोड सम्पत्ति धितो राखेर ३ गुणा बढी कर्जा प्रवाह गरेको अभियोगमा उनको समूहमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेलगत्तै देखि ज्ञवाली फरार थिए । ०७३ असाेज ४ गते पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च...
बैंकमा जम्मा गरेको रकम दशैंका लागि झिक्न कहिले जाँदै हुनुहुन्छ ? अवश्य पनि समयमै जानु होला । तर, दशैं–तिहारमा कुन दिनदेखि कुन दिनसम्म बैंकहरु खुल्ला हुन्छन् तपाईले जानकारी पाउनु भएको छ ? यदि छैन भने तपाईलाई हामी यो जानकारी दिंदैछौ । यस पटक दशैंमा बैंकहरु पाँच दिन बन्द रहने जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज ३० गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म अर्थात फूलपातिदेखि एकादशीका दिनसम्म...
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको झापाको दमक नगरपालिका–४ र ९ मा अवस्थित हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर तिर्न अटेर गरेको छ । २०६३ सालदेखि शाह नागरिक हैसियतमा फर्किएदेखि बगानले कर तिरेको छैन । पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत कर तिर्न अटेर गरेको दमक नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘धेरै पटक पत्र पठाइएको थियो, पूर्वराजा आएको बेला दमकमै सर्वदलीय संयन्त्रसहित कर तिर्न आग्रह गर्दा...
दशैंको मौका छोपेर चिनी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले चिनीमा दैनिक ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लुटिरहेका छन्। चिनी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको दबाबमा सरकार पर्नुका साथै उनीहरूको मनोमानी रोक्न नसक्दा अहिले विश्वबजारमा चिनीको मूल्य घटे पनि नेपाली बजारमा भने आकासिएको छ। केही साताअघि मात्रै खुद्रा पसलहरूमा प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ पर्ने गरेको चिनीको मूल्य अहिले बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले सरकार...
इन्धनको मूल्यमा फेरी वृद्धी
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा १, डिजेल र मट्टीतेलमा २/२ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ । अब प्रतिलिटर पेट्रोल १११, डिजेल र मट्टीतेल ९५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यसैगरी निगमले हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर चार रुपैयाँ ५० पैसा र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिब्यारेल ५० डलर वृद्धि गरेको छ। निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यतावत राखेको छ। निगमले...